ကိုဗစ်နှင့် မယ်လတိုနင် – Good Health Journal
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ သမ္မတ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကူးစက်ခံရတဲ့ အခါမှာ သူ့ကို ကုသတဲ့ ဆေးတွေထဲမှာ ကိုဗစ် ဗိုင်းရပ်စ် အတွက်ဆေးတွေ (Antibody cocktail)ပေးတဲ့ အပြင် ဗီတာမင် D၊ သွပ်ဓာတ်နဲ့ မယ်လတိုနင်တို့ပါ ပါဝင် လာပါတယ်။
မယ်လတိုနင်ဆိုတာက ကျွန်မတို့ ဦးနှောက်ကထွက်ရှိလာတဲ့ အိပ်စက်မှုကောင်းမွန်စေတဲ့ ဟော်မုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် သွေးထဲမှာရှိနေတဲ့ မယ်လတိုနင်ပမာဏက နေ့ခင်းပိုင်းမှာ လျော့ကျနေပြီး ညအချိန်မှာ မြင့်တက် လာပါတယ်။
မယ်လတိုနင်ဆေးကို အိပ်စက်မှု ပြဿနာရှိသူ၊ အဖျားရောဂါကြောင့် စိတ်ဂနာမငြိမ်ဖြစ်သူ (delirium)၊ သွေးကြောကျဉ်းသူ၊ ဗိုင်းရပ်စ်၊ ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ရုတ်တရက် အဆုတ်ထိခိုက်သူတွေကို အသုံးပြုတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဖြစ်တဲ့အခါမှာ အလွန်အမင်းရောင်ရမ်းတာ၊ ဓာတ်တိုးပစ္စည်းတွေထွက်လာတာ နဲ့ ခုခံအားစနစ် က အလွန်အမင်း တုံ့ပြန်မှုတွေ ဖြစ်လာတာကြောင့် ဆိုင်တိုကိုင်းမုန်တိုင်း ( Cytokines storm) ဖြစ်လာပြီး ရုတ်တရက် အဆုတ်ဒဏ်ရာရတာ( Acute Lung Injury ALI )၊ ရုတ်တရက် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပြင်းထန်စွာထိခိုက်တာ ( Acute Respiratory Distress Syndrome ARDS)နဲ့ သေဆုံးတဲ့အထိတောင် ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
မယ်လတိုနင်ဆေးဝါးက ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို တိုက်ရိုက်မသေစေနိုင်ပေမယ့် သူ့ရဲ့ရောင်ရမ်းမှုကိုလျော့ကျနိုင်တာ၊ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းဖြစ်တာ၊ခုခံအားစနစ်ကို အထောက်အပံ့ပေးနိုင်တာနဲ့ ခုခံအားစနစ် ရဲ့ အလွန်အကျွံတုံ့ပြန်မှုကို ထိန်းညှိပေးနိုင်တာတွေကြောင့် ကိုဗစ်ပိုးနဲ့ တစ်ခြားပိုးမွှားတွေကြောင့် ALI/ARDS မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် မယ်လတိုနင်ကြောင့် အိပ်စက်မှု ကောင်းမွန်ကာ ခုခံအားစနစ် မြင့်တက် လာတဲ့အတွက် အဘက်ဘက်ကကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ်။
မယ်လတိုနင်က ကိုဗစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲ အန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့ ကျောက်ကပ်ထိခိုက်တာ၊နှလုံးထိခိုက်တာ၊အသည်းထိခိုက်တာ အတွက်ပါ အကျိုးရှိပါတယ်။
မယ်လတိုနင်ကို ရေတိုအသုံးပြုတာကအန္တရာယ်ကင်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ Texas ပြည်နယ်က သမားတော် တစ်ဦးက သူရဲ့ ဆေးရုံတက် ရလောက်အောင်ဆိုးရွားတဲ့ လူနာ အပါအဝင် ကိုဗစ်လူနာပေါင်း ၄၀၀ကျော်ကို မယ်လတိုနင်ဆေးကိုပါထည့်သွင်းကုသခဲ့ရာ အလွန်ထိရောက်မှုတယ်လို့ လည်းသိရပါတယ်။
ကိုဗစ်လူနာတွေအတွက် မယ်လတိုနင် ကို အသုံးပြုတာက တိုက်ရိုက် သက်သေ မပြနိုင်သေးပေမယ့် သူ့ကို စမ်းသပ်ပြီး အသုံးပြုတဲ့ လူနာတွေမှာ အန္တရာယ်ကင်းပြီး အကျိုးများစွာ ရှိတယ်လို့တော့ဆိုပါတယ်။
Coid-19: Melatonin asapotential adjuvant treatment.
The latest supplement touted asacovid -19 treatment? Melatonin.